UW-MADISON ၌သင်မည်သည့်နှစ်ပေါ် မူတည်၍ ထွက်မည် - နှုန်းထားများ
UW-Madison ၌သင်မည်သည့်နှစ်ပေါ် မူတည်၍ ထွက်မည်
ညနေ ၆ နာရီမှာ
Freshman:6p.m. န်းကျင် သငျသညျ PDR သို့မဟုတ်ဆူရှီအမြန်ကနေအစောပိုင်းအစားအစာအတွက်မှာယူနေကြသည်။ သင်နောက်ထပ် ၂ နာရီလောက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပေမယ့်သင့်ဆံပင်နဲ့မိတ်ကပ်မစတင်ခင် Netflix မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မှာအစာကြေအောင်အချိန်ယူနိုင်ဖို့လိုတယ်။
Sophomore: ညနေစာအတွက်သင်မှာထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်နာရီခန့်မှာအစာစားဖို့စီစဉ်နေတယ်။ သင်နှင့်သင်၏အခန်းဖော်များက bars ည့်ခန်းတွင်ထိုင်နေကြသည်၊ ယနေ့ညတွင်သင်မည်သည့်အရက်ဆိုင်များဝင်ရန်ကြိုးစားမည်ကိုဆွေးနွေးကြသည်။ ရဲတွေစီးနင်းနေတယ်ဆိုတာမင်းကြားဖူးတယ်၊ ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာကိုအရင်သွားမယ်၊ ဘယ် ID ကိုသုံးမယ်ဆိုတာမဟာဗျူဟာကျတယ်။
အငယ်တန်း - အခုသင်ဟာအိပ်ပျော်နေတယ်၊ ​​တီဗွီကြည့်နေတယ်။ သင်အသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော KK, တနင်္လာနေ့၊ Double U, သို့မဟုတ်ဝီစကီတို့၏ ၀ ယ်ရန်စိတ်မပူပါ။ သို့မဟုတ်ဤအချက်အားဖြင့်သင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအိုင်ဒီဖြင့်ရရှိထားသည်။
အကြီးတန်းအဆင့် - နောက်ဆုံးသီတင်းပတ်၏နောက်ဆုံးအတန်းမှသင် (သင်အမှန်တကယ်သောက်လျှင်) ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းဝိုင်ခွက်တစ်ခွက်သောက်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်အလုပ်သင်ပြီးဆုံးသည်။ သငျသညျဖြစ်နိုင်သည်လည်းကောင်းတဲ့ညစာစားရန်သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ထွက် ဦး ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ည 8 နာရီမှာလား
Freshman - ဒီအချိန်မှာမင်းဆံပင်ကိုပြီးပြီ၊ သင့်သူငယ်ချင်းကမင်းရဲ့မိတ်ကပ်နဲ့သင့်ကိုကူညီနေတယ်။ ပြီးတော့မင်းကချစ်စရာကောင်းတဲ့အဝတ်အစားကိုရှာဖွေနေတယ်။ သေချာတာပေါ့၊ မင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာဘားတစ်ခုထဲမ ၀ င်ခဲ့ဘူး၊ ဘယ်သူမှမင်းကိုမတွေ့ခဲ့လို့တူညီတဲ့ရှပ်အင်္ကျီကို ၀ တ်ဆင်နိုင်ပေမယ့်အိပ်ဆောင်တွေထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ဖူးတယ်။
Sophomore: အခုအချိန်မှာမင်းဟာညစာစားပြီးရင်ရဲတွေလာမလာဘဲဘားကိုသွားဖို့အမှုဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီ။ ငါတို့ဆင်းသွားလျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်အတူတူဆင်းသွားကြလိမ့်မည်။ သင်အသက် ၂၁ နှစ်သာရှိသေးသည့်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သောအသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ ၂၅ နှစ်သာလမ်းလျှောက်လိုသောကြောင့်သင်အဆင်သင့်ပြင်နေသည်။
အငယ်တန်း - ဘယ်ကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတုန်းပဲ။ သငျသညျအလယ်၌အနည်းငယ်မှီဝဲနေနှင့်သင်အနည်းငယ်မလိုချင်တဲ့ခံစားရသို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းခံစားရစေခြင်းငှါ, နှင့် underclassman နှင့်အတူသောက်သုံးရေဆေးကြောစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ကျကွီးရှယျအိုမြားနှင့်အတူထွက်သငျ့သငျ့ရှိမရှိမသိရပါဘူး။
akon နှင့် 14 နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦး
အကြီးတန်း: စာသားပဲထွက်ဆွဲထား။ ဘယ်နေရာမှာမဆို ၀ င်ရောက်မှာကိုကြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။
ယခု 10pm ပါပဲ
Freshman: အခုသင်ဟာ Ruby ကိုစွမ်းအင်ရွေ့လျားနေတယ် (ဘယ်သူမှမသိတဲ့ဘေးမှာအခန်းကဒီနှစ်အထိနာမည်ရှိခဲ့တယ်) ။ သငျသညျသင်တန်း၏ရှည်လျားသောလိုင်းရိုက်နှက်လျှင်သင်, ဝင်ရန်အာမခံပါသည်။ သငျသညျအခြားလူ 200 ဆန့်ကျင်တက် squished နှင့်ချွေးအတွက်ယစ်မူးနေစဉ်န်းကျင်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်ကခုန်ဖို့ကြိုးစားခံရဖို့ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမဖြစ်နိုင်ဘူး။
Sophomore: ဒဏ်ငွေ Id နှင့်အတူသင်တို့တွင်သူများသည်တနင်္လာနေ့နှင့်ဝီစကီသို့သွားကြ၏။ သင်၏ zip code နှင့်အထက်တန်းကျောင်းကိုပြီးပြည့်စုံစွာသင်ပြီးသောနှစ်ကိုသင်သိသောကြောင့်သင်စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ သငျသညျတစ်ချိန်တည်းမှာသင်ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်ခေတ်မှီကြည့်ရှုစေသည်တဲ့မတ်မတ်ဝတ်ထားပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ID ရဲ့ KK ကိုကြိုးစားပြီးသူတို့ရဲ့သူတို့ကိုဒုတိယပုံစံနဲ့သူတို့အိမ်မှာမေ့တာနဲ့သင့်အသက် ၂၀ ဟာ bouncer ဆီသို။
အငယ်တန်း - လိုင်းများပြတ်သွားပြီးနောက်မိနစ် ၃၀ ခန့်စောင့်ဆိုင်းပြီးသင်ဘယ်နေရာကို ၀ င်ရောက်သည်၊ မည်သည့်နေရာသည်အပျော်အပါးဆုံးဖြစ်သည်ဟုပြောသည့်ဒုတိယထပ်ထံမှစာတစ်စောင်သင်ရရှိသည်။ အကယ်၍ သင်၏သူငယ်ချင်းသည်ယခုအပတ်တွင် ၂၁ နှစ်ပြည့်ခဲ့လျှင်မင်းကသူမအားအရက်သောက်ဆိုင်သို့သွားရန်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်သည် (ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမကကောင်တာနောက်ကွယ်မှလူကိုသူမရဲ့ ID ကိုတောင်းခံရန်မတတ်နိုင်သောကြောင့်) ။
အကြီးတန်း - ၀ တ်စားဆင်ယင်ခြင်း၊ အဆင်ပြေခြင်း၊ ရယ်စရာကောင်းသော၊ အေးမြသောအရာတစ်ခုခုကိုဝတ်ဆင်ခြင်း (ဘာကြောင့်မင်းထက်အသက်ပိုကြီးအောင်ကြိုးစားရတာလဲ?) မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအရက်သောက်နေတယ်။ မင်းဘ ၀ မှာအရက်သောက်တာကမင်းကိုအပျော်ဆုံးအရက်မူးအောင်လုပ်ပေးတာကြောင့်မင်းလည်ချောင်းကိုဖိအားမပေးရဘူးဆိုတာကိုမှတ်မိနေတုန်းမင်းကမင်းနဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသောက်နေတယ်။
Freshman - မင်းရဲ့အိပ်ဆောင်မှာနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့မတွေ့ဘဲနေ့တိုင်းရှေ့ကိုသွားနေမယ်၊ နေမကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းအိမ်ကိုသွားမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် PDR မှာရပ်လို့မရရင် (ညမှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်နိုင်မယ်)၊ သို့ပြုလျှင်သင်၏ညဉ့်ကုန်ပြီ။ သငျသညျဤမျှလောက်ပျော်စရာခဲ့ပေမယ့်သင်ဤမျှကာလပတ်လုံးအဘို့အဟောင်းများကို throwback သီချင်းတွေကိုသာကခုန်နိုင်ပါတယ်။ Plus အား6နာရီအကြာသင်သည်သင်၏ညအဘို့ပြင်ဆင်နေ - ဒါကအချိန်ကြာမြင့်စွာပါပဲ။
Sophomore: သင်၏သူငယ်ချင်းများ KK တွင်ပျော်နေသည်ကိုသင်တွေ့သည်နှင့်တပြိုင်နက် (ပျော်စရာမဟုတ်ပါ) သင် ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းသင်စွန့်လွှတ်လိုက်သည်။ သင်နှင့်အတူနေသောယောက်ျားလေးများသည်ကြောက်စရာကောင်းသော ID နှင့် သူတို့ကြိုးစားနေတာကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ သင်တို့ထဲကတချို့ဟာမင်းနဲ့အတူသူတို့အနားယူဖို့ထွက်ပြေးကြတယ်။
အငယ်တန်း: အခုအချိန်မှာသင်အရင်ကတစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့လူတွေနဲ့ရောနှောဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိုရည်တွေကိုသောက်နေတယ် (သင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကအမြဲတမ်းဝိုင်းရံထားခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ဝိုင်းရံထားတာကြောင့်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်) ။ သင်တို့ထဲကအချို့သည်သင်၌တည်းခိုပြီးကျန်တစ်ဝက်သည်နောက်ထပ်သုံးနာရီကြာအိမ်ပြန်ရောက်နေချိန်တွင်သင်အလုပ်တွင်သာနေသင့်သလောဟုစဉ်းစားမိလာသည်။
အကြီးတန်း - ဘဝဟာအခုအချိန်မှာကောင်းပါတယ်။ သင့်သောက်စရာများ၊ မိတ်ဆွေများနှင့်သင်၏နာမည်ကိုသိပြီးအခမဲ့ရိုက်ချက်များပေးသည့်ဖျော်ယမကာစပ်များရှိသည်။ ထိုအခါသင်ဒုတိယတန်းသို့ဝင်လာသည်ကိုသင်မြင်ပြီးသင်ကျောင်း၌သင်အချိန်ဘယ်လောက်ကျန်သည်ကိုသိပြီးစိတ်ခံစားမှုကိုစတင်သည်။
အဘယ်သူသည်နှင့်အတူတက်အဆုံးသတ် rory သငျ့သညျ
Freshman: အခုအနည်းငယ်သောအရာများဖြစ်ပျက်နေနိုင်ပြီ။ မင်းရဲ့အခန်းဖော်ကနိုးလာမှာမဟုတ်ဘူး၊ မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာအစာစားနေမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်ညဥ့်နက်တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့စကားပြောလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကိုအခန်းထဲပြန်သွားခိုင်းတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့လာမယ့်အချိန်အမြဲရှိပါတယ်!
Sophomore: frat မှာထွက်ထိုင်တာကသင်အိပ်ပျော်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျန်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အိမ်ပြန်ဖို့လမ်းစဖြစ်လိမ့်မယ်။ သင်အိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုရင်ရေခဲသေတ္တာထဲကိုသွားပြီး (နွေရာသီအစာအာဟာရကိုစားသုံးဖို့) ကျန်းမာစေမယ့်အရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေတာဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုစာပို့လိုက်ခြင်းဟာယခုအပတ်မှာစတုတ္ထညမှာနောက်တဖန်မအိပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမအိမ်ကိုပြန်လာဖို့လမ်းမရှိလို့ရိုးရိုးသားသားပြောတာပါ။
အငယ်တန်း: သင်နှင့်အတူအိမ်ပြန်ရန်ကောင်းသောကောင်လေးမတှေ့ခဲ့လျှင် (ဤအချက်အားဖြင့်သင်တို့ကို, သင်၏အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်ပဲပျော်စရာရှိခြင်းပြုသောအမှုကြောင့်လား? ... ) ထို့နောက်သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားအိမ်ပြန်နေကြသည်။ သင်ကြက်တစ်ကောင်ကိုကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်သိသောအရူး YouTube ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အကြီးတန်း - ဒီအချိန်မှာသေချာပေါက်အိပ်နေတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောရတာအဆင်မပြေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ သင်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုကျပန်းရှာဖွေခြင်းနှင့်ကောင်းသောညအိပ်စက်ခြင်းကိုပြုလုပ်လိုပါကနောက်တစ်နေ့တွင်သင်အမှန်တကယ်လူတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်သည်။